OnePlus Nord natara OxygenOS 10.5.11 nwelite | Gam akporosis
Ejiri OxygenOS 10.5.11 emelitere OnePlus Nord ma nweta nzacha nchekwa Jenụwarị
OnePlus weputara ọhụrụ software update maka OnePlus North nke na-abata dị ka OxygenOS 10.5.11. Nke a na-abịa dịka nlekọta OTA, na-enweghị nnukwu akụkọ, mana nke ahụ apụtaghị na ọ naghị ewepụta ihe nchekwa nchekwa nke ọnwa Jenụwarị.
Ekwentị na-anabata ngwungwu ngwa ngwa ọhụụ zuru ụwa ọnụ, ọ bụ ya mere na-agbanyela na Europe, India na United States, yana mpaghara ndị ọzọ gburugburu ụwa.
The OnePlus Nord na-enweta mmelite ngwanrọ ọhụrụ na-enweghị nnukwu mgbanwe na akụkọ
Ihe nkwuputa OxygenOS 10.5.11, dika anyi kwuru, bu otu obere mgbanwe. Nke a, kama ịbịarute na akụkọ, na-emejuputa ọtụtụ ndozi ahụhụ, ọtụtụ njikarịcha na mmụba nke usoro dị iche iche, ihe a na-ahụkarị. Versionsdị ụlọ maka mpaghara ọ bụla bụ ndị a:
Na ajụjụ, ihe mgbanwe nke OTA ọhụrụ maka akụkọ OnePlus Nord bụ ihe ndị a:
Ihe nchedo gam akporo emelitere na 2021.01
Ndozi usoro emelitere
OnePlus Nord bụ ama ama amalitere na July afọ gara aga nwere ihu igwe 6.44 inch Fluid AMOLED nwere mkpebi FullHD + na ọnụọgụ ume 90 Hz. Ngwaọrụ a nwere Snapdragon 765G n'okpuru mkpuchi, yana ebe nchekwa RAM nke 6 / 8/12 GB na ebe nchekwa dị n'ime nke 64/128/256 GB. O nwekwara batrị 4.115 mAh nke nwere ngwa ngwa 30 W, 32 + 8 MP igwefoto selfie abụọ, yana igwefoto igwefoto 48 + 8 + 5 + 2 MP.
Ihe a na-emebu: anyị na-akwado ka onye ọ bụla nwere ekwentị jikọọ na netwọk Wi-Fi siri ike ma dị elu iji budata wee wụnye ngwungwu ngwa ngwa ọhụrụ ahụ, iji zere iji achọghị data nke ngwugwu data ahụ. Ọ dịkwa oke mkpa inwe ọkwa batrị dị mma iji zere nsogbu ọ bụla nwere ike ime n'oge usoro nrụnye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ejiri OxygenOS 10.5.11 emelitere OnePlus Nord ma nweta nzacha nchekwa Jenụwarị
Esi wụnye AnTuTu na ngwaọrụ gam akporo gị
Warhammer Odyssey bụ 'ụlọ akwụkwọ ochie' MMORPG na-enweghị ọgụ na-akpaghị aka ma dị egwu na visuals